Convocation des électeurs - Tabera Randriamanantsoa menacé
Mahita atao foana ny olona rehefa fantany fa tsy ho lany amin’ny fifidianana. Mpikarama an’ady goavana ity rangahy ity, ary fantatra izao fa mitady izay anakorontanana no tena tanjony. Tokony andraisan’ny fanjakana fepetra ny mahakasika azy io.
5 septembre 2018 à 8 h 25 min
Ny fahendrena ho an’ny rehetra dia ny miatrika ny fifidianana izay efa niomanana fatratra mba tsy hisian’ny fifandirana vaovao indray! Ary maninona moa atoa Taberar tsy nilaza ampahibemaso ny olona izay niantso sy nanao « menace » azy t@ telephone raha marina izany???
Mandeha Daholo ireo karazana bombe à retardement mba hanakorontana ny fifidianana, Anisan’izany i Tabera izay tsy iza fa PION an’ny Rajoelina, hita mihitsy ireto fa olona tsy mivaky loha firenena fa ny fitiavan-tenany ihany no ataony ao an dohany.
De ho sanatria ve misy hifandraisan’ilay resany indray andro le hoe resaka Bois de rose ty e? sa film anizy roa ihany
Mikasa fotsiny ny anakorontana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Tokonny tsy milatsaka anie rehefa tsy vonona ee, fa tsy ny fanemorana ny fifidianana akory no atao hala-olana.
Ry Tabera sy ry Pety no mitovy, hatrizay tsy hita popoka ko maninona no rehefa akaiky fifidianana mihintsy no tonga tsy nantsoina sahala amin’izao eh! Ao raha!
Maninona raha tsorina fotsiny ny marina hoe tsy te hiatrika fifidianana ianao Andriamatoa Tabera dia vita ah!
Saika nety le fika saingy hoe ny fifidianana daholo aloha izao no mahamaika ny olona!
Fanorenantsoa dit :
Enganie fotsiny aloha mba tsy hisy fiatraikany amin’ny fifidianana izao zavatra mahazo an’ny kandidat Tabera izao!
Matahotra ny tsy ho lany indray andriamatao Tabera dia mitady fomba mba hanakorotanana ny fifidianana,tonga amin’ilay fitenena hoe te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony.